Fandraharahana diso matetika ataonao rehefa misafidy sehatra automatique marketing | Martech Zone
Fandraharahana Fahadisoana mahazatra ataovy rehefa misafidy sehatra automatique marketing
Alatsinainy, Novambra 30, 2020 Alatsinainy, Novambra 30, 2020 Bob Croft
A sehatra marketing automatique (MAP) dia rindrambaiko manodina ny hetsika marketing. Ireo sehatra dia manome fiasa mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny mailaka, ny media sosialy, ny gen gen, ny mailaka mivantana, ny fantsona fanaovana dokambarotra nomerika ary ny mpanelanelana amin'izy ireo. Ireo fitaovana dia manome tahiry marketing afovoany ho an'ny fampahalalana momba ny varotra ka ny fifandraisana dia azo kendrena amin'ny alàlan'ny fizarazarana sy ny personalization.
Misy fiverenana lehibe eo amin'ny fampiasam-bola rehefa ampiharina tsara sy ampiasana tanteraka ireo sehatra fanaovana marketing automatique; na izany aza, orinasa maro no manao hadisoana lehibe rehefa misafidy ny sehatra ho an'ny orinasany. Ireto no tohizako mahita:
Hadisoana 1: Ny MAP dia tsy momba ny marketing amin'ny mailaka fotsiny
Rehefa namboarina voalohany ny sehatra fanaovana automatisation marketing, ny tena ifantohan'ny ankamaroany dia ny fampandehanana mailaka fifandraisana. Ny mailaka dia fantsona mora vidy miaraka amina ROMI lehibe ahafahan'ny orinasa manara-maso sy mitatitra ny zava-bitany. Na izany aza, tsy ny mailaka ihany no antonony. Ny marketing dia ny fandefasana ny hafatra mety amin'ny mpanjifa mety amin'ny fotoana mety - ary mamela izany ny MAPs.
ohatra: Vao haingana aho no nanampy ny mpanjifa hitantana ny webinar-leveraging ny sehatry ny automatisation marketing. Manomboka amin'ny fisoratana anarana mialoha ny hetsika, ny fisavana ny andro hetsika, hatramin'ny fanarahana ny hetsika aorian'ny hetsika - dingana mandeha ho azy izy amin'ny alàlan'ny fantsona mailaka sy mailaka mivantana. Ny sehatra automatique marketing amin'ny mailaka irery dia tsy hanampy antsika hahatratra ny tanjontsika.
Fahadisoana 2: Ny MAP dia tsy mifanaraka amin'ny tanjona kendren'ny varotra midadasika kokoa
Nandritra ny taona niainako nandritra ny taona niasa niasa akaiky tamin'ireo mpanjifa, ny mpanjifa tsirairay dia samy nanana ny eritreriny momba ny safidin'ny sehatra. Matetika, ny mpanapa-kevitra amin'ny sehatra C dia miankina betsaka amin'ny vidin'ny lampihazo fa tsy zavatra hafa. Ary rehefa nanadihady ny firafitry ny haitao marketing izy ireo, dia hitanay hoe taiza no tsy niasa firy ireo sehatra - na ratsy kokoa - tsy nampiasaina mihitsy.
Ny zavatra voalohany tokony hapetraka hatrany rehefa misafidy MAP dia:
Inona ny tanjonao amin'ny marketing ao anatin'ny 3 volana?
Inona ny tanjonao amin'ny marketing ao anatin'ny 12 volana?
Inona ny tanjonao amin'ny marketing ao anatin'ny 24 volana?
Ny automatisation marketing dia tsy teny mahafinaritra na koa bala volafotsy. Izy io dia fitaovana iray hanampiana anao hahatratra ny tanjon'ny varotra. Noho izany, manontania foana hoe inona no mila tratrarinao ary atsangano ny MAP mba hifanaraka mivantana amin'ny tanjon'ny varotrao ary handrefesana ireo mari-pamantarana mahomby (KPI) anao.
ohatra: Ny mpanjifa e-varotra dia te-hampitombo ny vola miditra amin'ny alàlan'ny fantsona mailaka satria io fantsona io ihany no ampiasain'ny orinasa amin'izao fotoana izao ary manana angon-drakitra marobe izy ireo. Mety tsy mila mandeha ho azy akory izy ireo… mety hanome ny valiny rehetra ny mpanome tolotra mailaka (ESP) miaraka amina manam-pahaizana manokana momba ny marketing amin'ny mailaka. Inona no antony fandaniam-bola mihoatra ny 5 heny amin'ny teti-bola hampiasa MAP manao zavatra mitovy amin'izany?
Fahadisoana 3: ambanin-javatra ny vidin'ny fampiharana ny sarintany
Hatraiza ny fahalalan'ny ekipanao? Ny talenta no mety ho zava-dehibe indrindra rehefa mampiasa vola amin'ny MAP, saingy matetika no tsy raharahain'ny orinasa maro izay misafidy. Mba hahatratrarana ny tanjonao amin'ny marketing dia mila olona afaka mitantana tanteraka ny sehatra ianao ary manatanteraka ny fampielezankevitrao miaraka aminy.
Maherin'ny antsasaky ny mpanjifako no nisafidy sehatra iray tsy misy talenta anatiny hampiatrarana azy. Vokatr'izany dia miafara amin'ny fandoavam-bola maso ivoho marketing hitantanana izany. Ny fandaniana dia mampihena ny fiverenan'ny fampiasam-bola ary mety hahatonga azy io ho fatiantoka mihitsy aza. Matetika ireo masoivoho dia tsara manampy anao amin'ny fampiharana MAP anao, saingy lafo be ho an'ny orinasa madinidinika sy antonony ny mampiasa azy ireo mitohy.
Ny orinasa hafa dia misafidy ny hampiakatra tsara ny ekipa ao an-trano. Mandritra ny fizotry ny teti-bola, betsaka ny manadino ny manomana ny vidin'ny fiofanana ho ao amin'ny tetibolan'ny marketing. Ny vahaolana tsirairay dia mitaky fahaiza-manao lehibe; noho izany, tsy mitovy ny vidin'ny fiofanana. Marketo, ohatra, dia vahaolana ho an'ny mpampiasa miaraka amin'ny vidin'ny fiofanana fototra sahabo ho 2000 $ AUD any Aostralia. Raha tsy izany, maimaimpoana ny fiofanana Salesforce Marketing Cloud fiandohan'ilay lalan-kely.
Diniho ny vidin'ny fanananao sy ny fiofan'izy ireo rehefa manapa-kevitra amin'ny sehatra iray ianao.
Hadisoana 4: Tsy ampiasaina ny sombim-pahaizan'ny MAP
Ny MAP dia afaka manasokajiana ny vinavinanao sy ny mpanjifanao amin'izay rehetra ilainao azy. Tsy momba ireo singa data angona anananao ihany io fa koa mikendry tsara ny toerana misy ny mpanjifa amin'ny diany na lalan-dàlan'ny marketing. Ny fandefasana ny hafatra marina amin'ny fotoana mety arakaraka ny fihetsiky ny mpanjifany dia hampitombo ny sandan'ny mpanjifa… ny fitomboan'ny ROI anao.
Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny mpivarotra MAP dia manao fitiliana A / B hanatsarana ny valin'ny fampielezan-kevitra. Hanatsara ny valin'ny varotrao ity… amin'ny fanatsarana ny fotoana sy ny fandefasan-kafatra alefanao amin'ny mpanjifanao. Ny kendrena ny ampahan'ny mpanjifa sy ny fihetsik'izy ireo ary ny fizarana ny tarika demografika tsirairay dia hanararaotra ny tsy fitovian'ny fitondran-tena amin'ny mpividy.
Tsy mora velively ny misafidy ny vahaolana MAP mety ary tsy maintsy atao mihoatra ny vidin'ny sehatra ny fandinihana. Mazava ho azy, misy antony maro hafa mety tsy ahitan'ny fampiasam-bola MAP anao… fa farafaharatsiny ireo lesoka 4 mahazatra ireo dia hanatsara ny fahafahanao mahatsapa tanteraka ny fampiasam-bolanao!
Raha mila fanampiana bebe kokoa amin'ny fisafidianana iray ianao dia manorata azafady ary faly izahay manampy.
Tags: fihetsiky ny mpanjifaautomation emailemail marketing automationhetsika marketing ho an'ny hetsikapifidiananaMapsehatra marketing automatiqueFanofanana marketingfinday-barotraROI
Bob Croft dia mpitarika martech traikefa ao amin'ny faritra APAC, miara-miasa amin'ny mpanjifa 15 mahery tato anatin'ny 8 taona lasa manerana ny indostria maro.